Akụkọ Bible: A Tụọ Josef Mkpọrọ - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
JOSEF gbara naanị afọ iri na asaa mgbe a kpọọrọ ya gaa Ijipt. N’ebe ahụ, e resịrị ya otu nwoke aha ya bụ Pọtịfa. Pọtịfa na-arụrụ eze Ijipt a na-akpọ Fero ọrụ.
Josef rụsiiri nna ya ukwu bụ́ Pọtịfa ọrụ ike. Mgbe Josef tolitekwuru, Pọtịfa mere ya onye na-elekọta ụlọ ya dum. Ma gịnị mere Josef ji nọrọ n’ụlọ mkpọrọ ebe a? Ọ bụ n’ihi nwunye Pọtịfa.
Josef tolitere bụrụ nwoke mara nnọọ mma, nwunye Pọtịfa chọkwara ka ya na ya dinaa. Ma Josef maara na ọ bụ ihe ọjọọ, o kweghịkwa eme ya. Nwunye Pọtịfa were iwe nke ukwuu. Oge di ya lọtara, ọ ghaara ya ụgha, sị: ‘Onye ọjọọ a bụ́ Josef nwara idina m!’ Pọtịfa kweere ihe nwunye ya kwuru wee wesa Josef iwe dị ọkụ. N’ihi ya, o mere ka e tinye ya n’ụlọ mkpọrọ.
N’oge na-adịghị anya, onye na-elekọta ụlọ mkpọrọ ahụ hụrụ na Josef bụ ezigbo mmadụ. O wee mee ya onye nlekọta nke ndị mkpọrọ niile. E mesịa, Fero were iwe megide onye na-eburu ya ihe ọṅụṅụ na onye na-emere ya bred, ọ tụbakwara ha n’ụlọ mkpọrọ. Otu abalị, ha abụọ rọrọ nrọ pụrụ iche, ma ha amaghị ihe nrọ ha pụtara. N’echi ya, Josef sịrị ha: ‘Kọọrọnụ m nrọ unu.’ Mgbe ha kọọrọ ya, site n’enyemaka Chineke, Josef kọwaara ha ihe nrọ ha pụtara.
Josef gwara onye ahụ na-ebu ihe ọṅụṅụ, sị: ‘N’ime ụbọchị atọ, a ga-eme ka i si n’ụlọ mkpọrọ pụta, ị ga-amalitekwa iburu Fero ihe ọṅụṅụ ọzọ.’ Josef gbakwụnyeziri, sị: ‘Ọ bụrụ na i si n’ebe a pụta, kọọrọ Fero banyere m, iji nyere m aka isi n’ebe a pụta.’ Ma Josef gwara onye ahụ na-emere Fero bred, sị: ‘N’ime ụbọchị atọ nanị, Fero ga-egbupụ gị isi.’
N’ime ụbọchị atọ ahụ, ihe Josef kwuru mezuru. Fero mere ka e gbupụ isi onye ahụ na-emere ya bred. Ma e mere ka onye ahụ na-eburu ya ihe ọṅụṅụ si n’ụlọ mkpọrọ pụta, ọ malitekwara ijere eze ozi ọzọ. Ma, onye ahụ na-eburu Fero ihe ọṅụṅụ chezọrọ ihe niile banyere Josef! Ọ gwaghị Fero banyere ya, Josef wee nọrọ n’ụlọ mkpọrọ.
Jenesis 39:1-23; 40:1-23.
Afọ ole ka Josef dị mgbe a kpọọrọ ya gaa Ijipt, gịnịkwa mere mgbe o ruru ebe ahụ?
Olee otú Josef si banye n’ụlọ mkpọrọ?
Olee ọrụ e nyere Josef n’ụlọ mkpọrọ?
Gịnị ka Josef meere onye na-eburu Fero ihe ọṅụṅụ na onye na-emere ya bred bụ́ ndị a tụrụ mkpọrọ?
Gịnị mere mgbe e mere ka onye na-eburu Fero ihe ọṅụṅụ si n’ụlọ mkpọrọ pụta?
Gụọ Jenesis 39:1-23.
Ebe ọ bụ na n’ụbọchị Josef, ọ dịghị iwu e dere ede nke sitere n’aka Chineke bụ́ nke na-emegide ịkwa iko, gịnị kpaliri ya ịgbanahụ nwunye Pọtifa? (Jen. 2:24; 20:3; 39:9)
Gụọ Jenesis 40:1-23.
Ná mkpirikpi, kọọ ihe onye ahụ na-eburu Fero ihe ọṅụṅụ rọrọ ná nrọ na nkọwa Jehova nyere Josef. (Jen. 40:9-13)
Gịnị ka onye na-emere Fero bred rọrọ ná nrọ, gịnịkwa ka ọ pụtara? (Jen. 40:16-19)
Olee otú ohu ahụ na-ekwesị ntụkwasị obi nke nwekwara uche taa siworo ṅomie àgwà Josef? (Jen. 40:8; Ọma 36:9; Jọn 17:17; Ọrụ 17:2, 3)
Olee otú Jenesis 40:20 si egosi ihe mere Ndị Kraịst ji ele ememe ụbọchị ọmụmụ anya dị ka ihe na-ekwesịghị ekwesị? (Ekli. 7:1; Mak 6:21-28)